Very asa, tsy manan-tsafidy: Mpiasa mpifindramonina Myanmar tavela tao Thailandy nandritra ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2020 5:08 GMT
Mpiasa Myanmar mpifindramonina iray very asa tao amin'ny orinasam-panjairana noho ny fielezan'ny coronavirus, ka mahatonga azy tsy manana fidirambola hanaovana fandaniana isan'andro ho an'ny zanany sy ny fianakaviana. Mae Sot, Tak, Thailandy, May 2020. Saripikan'i Jittrapon Kaicome/The Irrawaddy
Ny lahatsoratr'i Jittrapon Kaicome dia avy amin'ny The Irrawaddy, tranokalambaovao mahaleotena iray ao Myanmar, nahitsy sy navoakan'i Global Voices indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
VAKIO: Tamin'ny Septambra 2018 mihoatra ny 2,2 tapitrisa ny mpiasa Myanmar misoratra anarana ara-dalàna ao Thailandy.
Noho ny fijotson'ny toekarena thailandey sy manerantany, nanakatom-baravarana ny fihariana sy ny orinasa ka ny mpiasa mpifindramonina no voalohany tavela amin'izany. Miditra ao anatin'ny fitotonganana ara-toekarena ratsy indrindra teo amin'ny tantaram-pireneny i Thailandy, miatrika andro mafy tokoa ireo mpifindramonina izay miasa mandray vola isan'andro.
Rehefa namoaka ny Hitsivolana Hamehana hifehezana ny fielezan'ny aretina COVID-19 i Thailandy tamin'ny faran'ny volana marsa dia nanakatona ny sisintaniny, tafahitsoka tao amin'ny firenena vokatr'izany ireo mpiasa mpifindramonina an-tapitrisany. Nisy ihany ireo mpiasa afaka nitodi-doha nankany Myanmar saingy maro no mbola ao Thailandy, tafahitsoka tsy manana asa ary tsy manan-tsafidy loatra hanampiana azy ireo. Ao anatin'izany ireo mpiasa Myanmar mpifindramonina ao Thailandy avaratra.
Mpiasa Myanmar mpifindramonina any amin'ny sisintany maka mangahazo, iray amin'ny zavatra vitsy azon'izy ireo atao hahazoam-bola rehefa very asa tamin'ny volana febroary noho ny fielezan'ny coronavirus. Phop Phra, Tak, Thailandy, May 2020. Saripikan'i Jittrapon Kaicome/The Irrawaddy
Miatrika fahasarotana noho ny sakana ara-pitenenana ao an-toerana ihany koa ireo mpiasa ireo. Maro no tsy mahay teknika sy solosaina ahafahany mahazo torohay ilaina sy fitarihan-dalana na fanohanana. Voafetra ihany koa ny zony hahazoana fanampiana ara-tsosialy, ao anatin'izany fanampiana tsy hitany izany ireo nokinasa hanampiana ny olona hiatrehana ny krizin'ny coronavirus. Miantona ao anaty fanjavozavoana ny fiainan-dry zaero.
Amin'ny sisintany Thailandy-Myanmar ao amin'ny faritanin'i Tak, nihiboka ny tanànakely ka nanery ireo mpiasa avy any Myanmar handao ny toeram-pamboleny sy fiompiany ny krizy, ka mahatonga azy ireo hiankin-doha amin'ny tolotra sakafo. Nilaza ry zareo fa tsy ampy azy ireo ny lanjambary natolotra, fa telo andro ihany dia lany raha maharitra indrindra.
Mpiasa mpifindramonina iray 26 taona antsoina hoe Cho Zin Win no miteny
Efa in-dimy nitrosa vary sahady ireo tambanivohitra, farafahakeliny herintaona no ilaina handoavana izany trosa izany.
Mpifindramonina Myanmar ao ambohitra manakaiky ny sisintany Thailandy-Myanmar tratran'ny fihibohana noho ny COVID-19 sady nandray tolotra sakafo. Phop Phra, Tak, Thailandy, May 2020. Saripikan'i Jittrapon Kaicome/The Irrawaddy
Ao an-tanànan'i Chiang Mai (miorina ao avaratra atsinanan'i Thailandy) mandritra ny fihibohana, lasa mahazatra ny mahita olona, ifangaroan'ny mponina ao an-toerana sy ny mpiasa mpifindramonina, milahatra hahazo sakafo.
Fitsidihana natao tamin'ny iray amin'ireo tobim-panorenana ao Chiang Mai no nampiseho fa nahatery ireo vadin'ny mpiasan'ny fananganam-panorenana very asa ny hanao ny asan'ny mpanadio trano any amin'ny hotely fandraisam-bahiny, raha vitsy monja ny ramose mahazo asa. Efa misy ny fianakaviana no tsy ampy 1000 baht (US$32,08) intsony ny ampelatanana, saingy mbola tsy maintsy mizaka ny vesatra fandaniana sy fitrosana ry zareo.
Ma Su Lwin dia Birmana mpiasa mpifindramonina niteraka nandritra ny fielezan'ny coronavirus tao Thailandy. Very asa izy rehefa nikatona ny ozinina niasany, ka lasa tsy manambola hiterahana na hitaizana ny zaza teraka izy. Mae Sot, Thailandy, May 2020. Saripikan'i Jittrapon Kaicome/The Irrawaddy
Kham Kheng Wong-Ong, 27 taona, dia mpifindramonina Shan (avy any Myanmar) miasa amin'ny maha-mpanadio trano azy ao Chiang Mai miteny an-dranomaso hoe:
Hatramin'ny nikatonan'ny toeram-piasako, tsy manambola tavela intsony aho, tsy haiko hoe aiza aho no hahita asa. Miaina ao amin'ny tobim-panorenana miaraka amin'ny zanakolahy efa-taona aho. Mpiasa amin'ny fanorenana mandray vola isan'andro ny vadiko. Tsy fantatray akory hoe rahoviana izy no hiato amin'ny asany. Tsy maintsy mizaka ny vesatry ny fandaniana rehetra toy ny herinjiro, saram-pianarana, sakafo ary fanafody ihany koa izahay.
Mpiasa mpifindramonina ao amin'ity tobim-panorenana miasa amin'ny orinasa shinoa saingy hazonina sy tara hatrany ny karaman-dry zareo. Tsy te-hitaraina hamely ny mpampiasa azy ireo ry zareo satria matahotra ny ho voaroaka. Raha voaroaka amin'ny asa ry zareo dia tsy hahita asa hafa no tsy afa-mody ihany koa satria mikatona noho ny fianahan'ny coronavirus ny sisintany. Chiang Mai, Thailandy, Marsa 2020. Saripikan'i Jittrapon Kaicome/The Irrawaddy
Nony tonga ny volana jolay dia nesorina ny famerana amin'ny fihariana ary saika nisokatra avokoa indray ny fihariana. Saingy noho ny fitotongan'ny toekarena nentin'ny krizin'ny coronavirus, mbola tsy afaka mamerina miasa ireo mpiasa maro ireo fihariana ireo. An'hetsiny ireo mpiasa mpifindramonina ao amin'ny firenena—mba tsy ilazana hoe mihoatra noho izany—tsy an'asa ary tsy mahazaka ny “andavanandro vaovao” amin'ny toekarena.
Mpifindramonina Myanmar mizaka ny COVID-19 tonga handray fanampiana ara-tsakafo nomanin'ny firahalahiana marofoko tarihan'i Johny Adhikari ao amin'ny tempoly Wat Sai Moon. Chiang Mai, Thailandy, Avrily 2020. Saripikan'i Jittrapon Kaicome/The Irrawaddy
Myanmar (Birmania) 17 ora izay